Wararka Dibadda – Page 8 – Shabakadda Amiirnuur
Madaxweynaha Turkiga Rajab Dhayib Ordogan ayaa hanjabaad culus u jeediyay dowladda Maraykanka oo ay bah wadaag ka yihiin dagaallada ka socoda qaar kamid ah caalamka Islaamka sida Afqaanistaan iyo Soomaaliya. Ordogan ayaa isagoo waraysi siinaya mid kamid ah telefeshinnada maxalliga ah ee Turkiga, wuxuu sheegay in dowladiisu ay awood u […]
Dowladda Mareykanka ayaa qorshaynaysa in ay ciidamadeeda kala baxdo dalka Afghanistan oo muddo 18 sanadood ah ay duullaan gardarra ah ku joogaan. Shabakadda NBC News ayaa baahisay warbixin kooban oo ay ku sheegayso in mas’uuliyiinta wasaaradda difaaca ay qorshanayaan in kumanaan kun oo askari ay kasoo qaadaan dalka Afghanistan. Mas’uuliyiin […]
Maalmihii lasoo dhaafay wadanka Aljeeriya waxaa ka soconayay doorashooyin madaxtnimo oo ay soo abaabuleen maamulkii bedeley Butafaliqa, doorashooyinkaas oo ay si adag uga hor yimaadeen dadka shacabka ah. Dadka ka qeybgalay doorashooyinka ayaa la sheegay iney aad u yaraayeen, islamarkaana aaney gaareyn 40% tirada guud ee shacabka Aljeeriya, waxaana dadka […]
Beeraleyda galleyda ee dalka Kenya gaar ahaan kuwooda ay usoo go’day Galleyda illaa bishii Oktoobar ee sannadkan ayaa qarka u saaran iney khasaaraan sababo la xiriira xaaladaha qoyan ee sarreeya iyo saameynta cayayaanka maadaama bakhaarka Qaranka iyo Guddiga Wax soo Saarka (NCPB) ay wali xiran yihiin. Qaar ka mid ah […]
6 Ameerikaan Ah oo Lagu Dilay Weerar Ka Dhacay Gudaha Dalkooda.
Wararka naga soo gaaraya dalka Mareykanka ayaa waxay sheegayaan in weerar uu ka dhacay magaalada Jersey ee gobolka New Jersey. Weerarkan ayaa waxaa lagu dilay 6 Ameerikaan ah oo uu ku jiro sarkaal sare, waxaana ku dhaawacmay 5 kale, sida ay sheegayaan wararka horudhaca ah. Illaa iyo hadda ma cadda […]
Maanta, oo Talaado ahayd, garsoorka Algeria ayaa soo saaray xukunno ka dhan ah ragga ka soo baxay nidaamkii Boutefliqa, oo ay ku jiraan ra’iisul-wasaarayaal iyo wasiirro. Garsooraha maxkamadda, “Siidi Maxamed” oo ku sugan caasimadda, ayaa soo saaray go’aanno uu 15 iyo 12 sano oo xabsi ah uu ku xukumay Ra’iisul […]
Dowladda Kenya waxay xirtay gudoomiyaha magaalada caasumadda ah ee Nairobi, Jimcihii kadib amar uu soo saaray Xeer Ilaaliyaha guud ee dalkaas, Nuuradiin Xaaji, amarkaasoo ahaa in lagu xiro eedeymaha la xiriira dambiyada musuqmaasuqa. Sida ay qoreen wargeysyada Kenya. Xeer ilaaliyaha guud ee Kenya ayaa ku eedeeyay Mike Sunko iyo mas’uuliyiinta […]
Raiisel wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamduuk ayaa todobaadkan shaaciyey in tirada askarta ka dagaallamaya Yemen ee ka tirsan isbahaysiga carabta ay hoos uga dhacday 15,000 ilaa 5,000. Kudhawaaqista hadalkiisan ayaa timid ka dib booqasho 6 maalmood qaadatay oo uu ku joogay Mareykanka, xilligaas oo uu doonayey aqbalaada Mareykan oo ah in […]
Tramp oo Si Xun Ugu Jeesjeesay Muslimiinta Kuna Faanay Dhulka Uu Yahuuda U Aqoonsaday. (Warbixin)
Muddo laba sano ah ayaa kasoo wareegatay markii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Qudus u aqoonsaday dhul ay Yahuudu leedahay. Dalka Mareykanka ayaana waxaa maanta ka dhacay shir sannadeed ay qabsadaan koox Yahuuda u ol’oleysa oo magacooda loo soo gaabiyo AIPAC. Madaxweynaha dalkaas oo khudbad ka jeediyay shirkan ayaa wuxuu […]
Taliyaha ciidamada Ugandha, Jeneral David Mohoozi, oo macsalaameynayay askar ka tirsan ciidankooda oo Soomaaliya loo soo dirayo ayaa walaac ka muujiyay khibradda iyo xeeladaha milatari ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab. Wuxuu ku taliyay in ciidamadan ay noqdaan kuwa feejignaantoodu ay aad u sarreyso maxaa yeelay cadowga (Xarakada Shabaabul Mujaahidiin) waxay leeyihiin […]